SATAKE Paddy Separator PS200D(2)-T
The Paddy Separator is an oscillation-type separator with very high sorting performance and an easy –to-maintain design. -Stable Performance -Minimized Installation Space -Automatic Stop Device -Easy Sampling -Easy Inspection of Separating Condition -Easy Flow Adjustment
High quantity EM185 diesel engine with light
1.100% original dependable diesel engine. 2.Strong structure 3.High comprehensive quality with reasonable price. 4.Stable working perfomance and long service life. PISTON, CYLINDER LINER, CAMSHAFT, CRANKSHAFT, CONNECTING ROD,CYLINDER HEAD, FUEL PUMP ASSEMBLY, FUEL INJECTOR ASSEMBLY, FUEL FILTER ASSEMBLY, NOZZLE, PLUNGER, FUEL PIPE, HIGH PRESSURE PIPE, OIL PIPE, SILENCER, INTAKD PIPE,EXHAUST PIPE,OIL PUMP, VALVE KIT SET, FUEL TANK, HOPPER,OIL SEAL, WATER SEAL RING, WATER DRAIN COCK,FLYWHEEL, OIL INDICATOR, GOVERNORFORK ASSEMBLY,GEAR SET,BALANCING SHAFT,BONNET.
SATAKE Optical Sorter REZS400
This model is equipped with Japan’s latest full color camera technology for detecting subtle color differences Yet, it’s simplified structure made the machine affordable for everyone. -Most advanced full-color sorting technology -Advanced color touch screen -Automatic defect profiling
4 STROKE SINGLE CYLINDER ZS1115 DIESEL ENGINE
1. excellent performance 2.Good quality and reasonable price. The main diesel engines of our company is R175A, R180, R190, ZS1100, ZS1110, ZS1115, ZS1125, ZS1130 and so on, which are widely used in tractors, water pump, agriculture machinery and engineering machinery, etc. All of our product are assmbled by the best diesel engine parts,to make sure the excellent performance.
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး GTSTAR Engine ကတော့ လှောင်စာဆီအနေဖြင့် ဒီဇယ်ဆီကိုသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ GTSTAR Engine ကို လှေ၊ သဗ္ဗာန်၊ ရေယာဉ်စသည်တို့တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မီးစက်၊ရေတင်ပန့် တို့နှင့်လည်းတွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ Cylinder အနေဖြင့် Single Cylinder ကိုသာအသုံးပြုထားပြီး Cold Syle အားဖြင့် Water-cooled ကိုတပ်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူအားပေးလိုသော Customers အတွက် Kyaw Shin Co.,Ltd တွင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
SATAKE Rotary Sifter ST-527R-T
The Rotary Sifter separates milled rice efficiently into multiple classes:large impurities, head rice, mixture,small to large brokens, chips,bran, etc. -Accurate and Efficient Sifting -Thousands of Possible Sieve Combinations -Completely Sealed Sieve Frame
Rheken Pumps (ရေစုပ်ပန့်)
Rheken Pumps သည်မီးအား လျှပ်စစ်သုံးရေစုပ်စက် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်နေအိမ်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ မော်တာ၏ရေဆွဲအား ကောင်းခြင်း၊မော်တာသံငြိမ်သက်မူရှိခြင်း၊ ရေထွက်အားကောင်းခြင်းစသည် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါသည်။
SATAKE Rice Length Grader LRG204FA
The Length Grader uses an indented cylinder to separate one or two kinds of broken or shorter grains from whole grain by length. -Easy Assembly and Disassembly -Equipped with Sampling Outlets -Equipped with Inspection Windows -Low Maintenance -More than 10 Types of Screens Available
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။) ပုံပါမြင်တွေ့ရသော စက်ကို (Heating Dryer) သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် အခြောက်သောစက်ဟုခေါ်ပါသည်။ ယင်းစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ကြက်သွန်ဖြူ၊ မြေပဲ၊ စပါး၊ နှံစားပြောင်း၊ ပြောင်းဆန်၊ လင်ငန်းသီး၊ ဆန်ခေါက်ဆွဲ၊ ငါး) တို့ကိုတိုက်ရိုက်အခြောက်ခံနိုင်ပါသည်။ သီးနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အခြောက်ခံပေးပြီး အရည်အသွေးမြှင့် စားသောက်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ အလိုလျောက် အပူပေးစနစ်လဲ ပါရှိပါသည်။ အပူချိန်ကို ၉၉ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိ အများဆုံး ထားပြီးသုံးနိုင်ပါသည်။ မီးခိုးခေါင်းတိုင်မှ အနံ့ဆိုးများထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။ စားသောက်ကုန်အတွက် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရွေးချယ်မှုဟုလဲ ဆိုနိုင်ပါသည်။
( GL-220 Kubota ) လယ်ယာ သုံး ကူဘိုတာ လယ်ထွန်စက်
(TESUAN ) တက်စွမ်း ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကူဘိုတာ ထွန်စက်နှင့် ၄င်းစက်နှင့် ပတ်သတ်သော စက်ပစ္စည်းကိရိယာ အချို့ ကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဖြန့်ချီ ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ GL-220 ,4WD သည် ကူဘိုတာထွန်စက် အမျိုး အစားဖြစ်ပြီး အင် ဂျင် အမျိုးစားမှာလည်း Kubota 1.5 L ,3စလင်ဒါ ဖြစ်သောကြောင့် သုံးစွဲရာ တွင် လွယ်ကူ အဆင် ပြေစေပါသည်။ စက်၏ အင်ဂျင်ပါဝါ မှာလည်း မြင်းကောင်ရေ 22 ကောင်အား ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် တွင် အသုံးဝင်သော ကူဘိုတာ ထွန်စက် တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း Kubota လယ်ထွန်စက်၏ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် စွမ်းအားသည် ၈ နာရီ လျှင် ၅ ဧက အထိ အ လုပ်ပြီးစီးအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း Kubota GL-220 ကိုဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက တက်စွမ်း (TESUAN ) ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက် သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Kubota M7040 ( စွမ်းအားမြင့် ထွန်စက်)
သရဖူစိုးမြင့် ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လယ်ယာ သုံးစက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်သည့် စွမ်းအား မြင့် ကူဘိုတာ M7040 စွမ်းအားမြင့် ထွန်စက်ကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း စွမ်းအားမြင့် ကူဘိုတာ လယ်ထွန်စက် သည် လူကြီးမင်းတို့ စိုက်ပျိုးမြေ များနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း များ တွင် အလွန်အသုံးဝင်သော စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်း တစ်မျိုး ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကူဘို တာ ရှေ့ ဘက်မြေထိုးစက်ကို လည်း လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ရောင်းချပေး လျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူ အသုံးပြု ရာတွင် လည်း စက်တန်ဖိုး၏ ၂၀% သို့ မဟုတ် ၃၀% ပေး သွင်းပြီး ၂ နှစ် / ၃ နှစ် အရစ်ကျစနစ် ဖြင့် လည်း ဝယ်ယူ နိုင်စေရန် အတွက်ရောင်းချပေး လျက်ရှိပါ သည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ကူဘိုတာ စွမ်းအားမြင့် လယ်ထွန်စက်ကို ဝယ်ယူ အ သုံးပြု လိုပါက အတိုးနှုန်း သက်သာပြီး နှစ်ရှည် အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင် မည့် အခွင့်ရေးကို လက်လွတ်မ ခံရအောင် သရဖူစိုးမြင့် ကုမ္ပဏီမှ ယခု ပဲ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Kubota Combine Harvester ( အိတ်သွပ် / လှောင်ကန် )
သရဖူစိုးမြင့် ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လယ်ယာ သုံးစက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်သည့် စွမ်းအား မြင့် ကူဘိုတာ DC 70G (အိတ်သွပ် / လှောင်ကန် ) ပါဝင်သည့် စိုက်ပျိူးရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း ကူဘိုတာ Combine Harvester သည် လူကြီးမင်းတို့ စိုက်ပျိုးမြေ များနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း များ တွင် အလွန်အသုံးဝင်သော စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်း တစ်မျိုး ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူ အသုံးပြု ရာတွင် လည်း စက်တန်ဖိုး၏ ၂၀% သို့ မဟုတ် ၃၀% ပေး သွင်းပြီး ၂ နှစ် / ၃ နှစ် အရစ်ကျစနစ် ဖြင့် လည်း ဝယ်ယူ နိုင်စေရန် အတွက်ရောင်းချပေး လျက်ရှိပါ သည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်း တို့ အေ နဖြင့် ၄င်း ကူဘိုတာ စွမ်းအားမြင့် လယ်ထွန်စက်ကို ဝယ်ယူ အ သုံးပြု လိုပါက အတိုးနှုန်း သက်သာ ပြီး နှစ်ရှည် အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင် မည့် အခွင့်ရေးကို လက်လွတ်မ ခံရအောင် သရဖူစိုးမြင့် ကုမ္ပဏီ ကို ယခု ပဲ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
KUBOTA Rice Combine Harvester- စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်
စပါး၊ပဲခင်းများရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီးအရည်အသွေးပြည့်ခိုင်မာတောင့်တင်းသည့်အတွက်တောင်သူဦးကြီးများအချိန်မှီရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီးအလုပ်များလျင်မြန်စွာပြီးစီးကာအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစေနိုင်ပါသည်။
The NC131 walking tractor has good perforance. Its main chracteristics is as below. 1. Compact structure, nice appearance. 2. Reliable performance in shift, clutch, brake and steering system. 3. The tractor is widely used for ploughing, raking, spraying, irrigation, drainage, planting, reaping, ditching and transportation etc.